Madaxweyne Siilaanyo Oo Khudbad Quluubta Dadweynaha Soo Jiidatay ka jeediyay Xuska 18-ka May | Salaan Media
Madaxweyne Siilaanyo Oo Khudbad Quluubta Dadweynaha Soo Jiidatay ka jeediyay Xuska 18-ka May
“Shalay Annagaa Soomaalinimada dan moodaynay ee waa nala nacsiiyey, Annagaa bilaa shuruud iyo is aamin ku tagnay, waa nalagu kalifay in aan idinka aamin baxno”
“Somaliland waa xaqiiqo jirta, sax iyo xaq toonana maaha in beesha caalamku iska indho iyo dhago tirto xaqiiqdaa aan hummaaga lahayn”
“Wax kasta oo ay nagu kalifto Madaxbanaanida iyo Qaranimada Somaliland waa lama taabtaan”
“Kulamadii Somaliland Iyo Soomaaliya waxa ka soo baxay heshiisyo summad u ah jiritaanka qaranka Somaliland”
Hargeysa (SM)-Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa khudbad dheer oo siyaasiya u jeediyay shacbiga Somaliland Munaasibadda 22-guurada ka soo wareegtay dib ula soo noqoshadii xornimada Somaliland darteed.
Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo oo dadweynaha khudbad uga jeediyay barxada hore ee xarunta Madaxtooyadda Somaliland, waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay waxqabadka xukuumadda, siyaasadda, cilaaqaadka Somaliland iyo beesha caalamka.
Khudbadii Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo dhammaystirani waxay u dhignayd sidan:-
“Dhamaan Bulshada reer Somaliland waxaan ugu Hambalyeynayaa farxada maalinta Qaranimada JSL ee 18-ka May. Guud ahaan waxaan dadkayga ku bogaadinayaa gudo iyo dibedba dabaal degga sannad guurada 22aad ee aasaaskii Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaan Ilaahay uga mahad celinayaa Nabad-gelyada iyo Nimcada uu ina siiyey iyo horumarka uu ina waafajiyey.
Horumarka dalku waa halbowlaha koowaad ee aynu higsanayno, waxaad ogtihiin halka uu dhaqaalaha wadanku marayey , waanad ka war-haysaan halka aanu gaadhsiinay, balse wali fari kama qodna, weli waxaanu u faydanahay sidii uu dhaqaalaheenu u gaadhi lahaa meel halkaa ka sii fiican. Waxaanan garwaaaqsanahay baahida jirta iyo heerka ay nolosha bulshadu marayso iyo duruufa kala duwan ee ay ku nool yihiin dadkaygu, waxaan garawsanahay, oo ogahay xilka iyo masuuliyada iga saaran, cidina igama jecla inay gaadhaan nolol aad u fiican, waxbarasho, caafimaad, cunto iyo biyo ku filan, waxaanse ka xumahay in dadkaygu maanta dayaceen Xoolihii, Deegaankii iyo waliba Beerihii!
Sidee baynu ku horumaraynaa hadaynaan ku tacbin dhulkeena? Hadaynaan u samrin oo u dhididin Dhulkeena?
Waxaanu ka bilownay Caasimada wadooyin casri ah, si aynu ula tartano caasimadaha dalalka jaarka ah iyo kuwa dunida, insha Allaahu goboladana waanu gaadhsiin doonaa. Waxaanu dardar gelinay dhismaha wadooyinka laamiga ah ee magaalooyinka isku xidha.
Beesha caalamka waxaan leeyahay, dadkaygu waxay u tashadeen aayahooda, dalkaygu wuxuu lasoo noqday Madax-banaanidiisii iyo Qaranimadiisii, Somaliland waa xaqiiqo jirta, sax iyo xaq toonana maaha in beesha caalamku iska indho iyo dhago tirto xaqiiqdaa aan hummaaga lahayn.
Midnimada maanta la hadal hayo, dadkanaa (Reer Somaliland) horseed u ahaa iyadoo ay niyad wanaag iyo walaalnimo qalbigooda ka buuxdo. Nasiib daro, maalintii la is raacay shan maalmood dabadeedba Midnimadii waa lagu hungoobay, waxaanay ahayd 5-tii July markii uu Yuusuf Ismaaciil Samatar Gaandhi Khudbad uu jeediyey daboolka kaga qaaday xaqiiqdii Jirtay in ahayd in is-raacii aanu u dhicin sidii laga filayey Midnimadiina lagu Hungoobay! .
Waxay ahayd dhacdo aan la dafiri karin in Dastuurkii laysku raaci lahaa ee Somaliland iyo Soomaaliya ku midoobi lahaayeen dadkii Reer Somaliland ay 90% ugu codeeyeen Maya “NO”, iyagoo Diidmo qayaxan kala hor yimid, balse nasiib darro dhagahaa laga furaystay, taasi waxay dhaxalsiisay inqilaabkii dhalinyaradii Saraakiisha ahaa ee reer Somaliland ay Xilligaas sameeyeen. Kaas oo bannaanka soo dhigay tabashadii iyo dareenkii reer Somaliland.
Waxaanay ahayd Nasiib-daro in aan la tix-galin dareenkaa ee sida imikaba caadada u ah Soomaaliya in dad Suuqa jooga oo aan metelin Bulshada Lagu Buuxsado kuraasta, waxay ahayd quustii ay dadka reer Somaliland israacii kaga talax-gabeen.
Muddo yar ka dib, waxaa bilaabmay qalalaasihii iyo afgembigii dawladii digteetarka ahayd, cid dambana tallo lama waydiin, waxaana lagu war helay iyadoo dadka la isku xidh-xidhay laguna xasuuqay JAZIIRA, ganacsatadii qoorta laysugu dabay oo la dhigay Burco, Malko Durduuro, Kal-sheekh iyo goobo badan oo aan tiro lagu soo koobi karin.
Waxay ahayd nabar xanuun badan iyo wax naxdin leh, oo aan la ilaawi karin diyaradiihii Hargeysa ka kacayey ee duqaynayey maatadii Hargeysa ay ka baro kiciyeen illaa intii ay dhaafeyeen xuduudka Ethiopia.
Waxaan leeyahay madaxda Bulshada Soomaaliya hindisaha Midnimada anagaa keenay nalama khasbin Shalay annagaa Soomaalinimada dan moodaynay ee waa nala nacsiiyey, anagaa bilaa shuruud iyo is aamin ku tagnay, waa nalagu kalifay in aan idinka aamin baxno, waanu soo tijaabinay Midnimada Kalsooni dambe naguma hadhin diyaarna uma nihin riyadii beenowday ee 5tii Somaliyeed.
Inaga oo ka bilownay wadamada aynu jaarka nahay waxaynu adduunyada kula dhaqanay jaar wanaag, wax wada qabsi iyo in aynaan faro galin ku samayn arrimaha u gaarka ah dalalka kale.
Dhammaan talaabooyinkaasi waxay ay dhabada u xaadhayaan inaynu ka midho dhalino qadiyada madax banaanida Jamhuuriyadda Somaliland, waxaynu ku talaabsanay inaynu usoo bandhigno beesha caalmka jiritaankeena, heerka aynu gaadhnay iyo sida ay inooga go’aan tahay hanashada madax banaanideenu.
Waxaan ugu baaqayaa inay dhawrtaan sharaftooda, gobanimadooda, dhaqankooda iyo diintooda, marxalad kasta oo ka hortimaadana ay kaga gudbaan wadajir iyo midnimo. Waxaan balan qaadayaa inaan dalkayga iyo dadkayga ku hogaamiyo dariiqa horumarka, dhawrista xuquuqda, amniga, difaaca qaranka iyo qabyo tirka madax banaanida dalka Insha Allahu. Waxa aan eebe inooga baryayaa in aynu ku gaadhno munaasibadan teeda kale nabad-gelyo, Horumar, Ictiraaf iyo Midnimo, in Illahay qaranka ka dhigo mid waara oo dadkiisu ku noolaado Gobonimo, Barwaaqo, Sharaf iyo Horumar. Mahad Eebaa Leh, idina waad mahadsantihiin.”
Dhinaca kale, Kumanaan dadweyne ah ayaa maanta qarqiyay jidadka waaweyn ee magaaladda Hargeysa kuwaasi oo sitay calanka Somaliland oo ay ka dhigteen koofiyado, garamo, jeeni qaar, toobad iyo istiikaro.
Sidoo kale waxa socod gaardis ah ku maray jidka badhtamaha magaaladda Hargeysa sadexda ciidan qaran, shaqaalaha dawladda, ururadda bulshadda, jaamacadaha iyo ardayda dugsiyadda sare.